Iindaba - Loluphi olona luhlu luphambili lwee-abrasives?
Luluphi olona luhlu luphambili lwezinto ezirhabaxa?
Abrasive Abrasives ligama eliqhelekileyo leerrasives kunye neerrasives, kubandakanya iimveliso ezirhabaxa kunye neemveliso zeBai Abrasives. Abrasive Abrasives zaziwa njengamazinyo emizi-mveliso. Xa besila, esirhabaxa okanye esirhabaxa izixhobo zisetyenziswa njengesixhobo sokuguba kumalungu omatshini ukuhlangabezana neemfuno ezithile zobugcisa. Iirrasras ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo kukusika kunye nokusila iincakuba zamavili, iimfama, ukutshintsha kweediski ngokukhawuleza, ukugaya imiqulu, iivili ezibophelelweyo, iiringi zokugaya iisandi eziliwaka kunye neeringi zokugaya ze-sandpaper, iivili zokugaya i-blade ezingamawaka, iivili zokugaya iwaka, Iifayile ezijikelezayo zentsimbi ye-tungsten. Iimveliso ezirhabaxa ikakhulu zahlulwe zangurras zecorundum kunye nesilabhoni khabhayithi abrasives
1. I-brown corundum esirhabaxa, ubukhulu becala yenziwe nge-Al2O3, inobulukhuni obuphakathi, ukuqina okuphezulu, amasuntswana abukhali, ixabiso eliphantsi, elifanelekileyo ekuqhubeni isinyithi ngamandla aqine. I-Microcrystalline corundum abrasives kunye ne-black corundum abrasives ziziphumo zabo.
2. Ubulukhuni be-corundum abrasives emhlophe bungaphezulu kancinci kobo be-corundum emdaka, kodwa ubunzima bayo abukho mgangathweni. Kulula ukusika indawo yokusebenza ngexesha lokusila, ngepropathi elungileyo yokuzilola, ixabiso elincinci le-calorific, amandla okusila anamandla kunye nokusebenza ngokukuko. IChromium corundum esirhabaxa sisiphumo sayo.
3. I-crystal corundum esirhabaxa yodwa yenziwe yikristale enye, kwaye ineziphelo ezihle zokusika, ubukhuni obuphezulu kunye nobukrakra, amandla okusila anamandla kunye nobushushu obuncinci bokugaya. Ukungancedi kukuba iindleko zokuvelisa ziphezulu kwaye iziphumo ziphantsi, ke ixabiso liphezulu kakhulu. I-Zirconium corundum abrasives ikwindawo yekristale enobunzima obuphantsi, ubungakanani beekristale kunye nokumelana kakuhle nokunxiba.
4. I-black silicon carbide abrasives, i-silicon carbide abrasives eluhlaza, i-cubic silicon carbide abrasives, i-cerium silicon carbide abrasives, ye-silicon carbide abrasives. Izinto eziphambili zi-silicon carbide SiC, enobunzima obuphezulu, ubukrwada obuphezulu, iinkozo ezibukhali ezibukhali, ukuqhuba kakuhle kwe-thermal kunye nokumelana nokunxiba okuqinileyo, okulungele ngakumbi ukuqhubekeka ngesinyithi esomeleleyo kunye nesinyibilikisi kunye neemveliso ezingezizo ezesinyithi.
Ixesha Post: Aug-19-2020